Global Voices teny Malagasy » Resadresaka Tamin’i Hugues Lawson-Body, Mpakasarin’ireo Olo-malaza, Ireo Tanora “franciliens” Ary Mpamokatra Ny Andian-tantara Barbershop · Global Voices teny Malagasy » Print
Resadresaka Tamin'i Hugues Lawson-Body, Mpakasarin'ireo Olo-malaza, Ireo Tanora “franciliens” Ary Mpamokatra Ny Andian-tantara Barbershop
Voadika ny 03 Avrily 2016 14:03 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Frantsa, Togo, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Saripika, Tanora, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Fonon'ilay bokin'i Hugues Lawson Body ‘Jeunes Parisiens’ (Tanora Pariziana)
Miaina vanimpotoana iray isika izay sarotsarotra ny miresaka lohahevitra sasantsasany eny anaty fiarahamonina na eo am-pisakafoanan'ny fianakaviana: ny fifindramonina, ny resaka mahalahy na vavy, ny tsy fitoviana ara-tsosialy, ny foko niaviana ary ny fanambadiana ho an'ny olona rehetra.
Iray amin'ireo izay manana hery hiresahana azy ireny tsy amim-pihambahambana sy tsy misy teritery i Hugues Lawson Body .
Teraka tany Togo i Lawson-Body fa lehibe tao Parisy kosa, tany Marais. Ho azy dia tsy resaka anaty taratasy fotsiny ny fanontoloana sy ny fifangaroanà fiaviana na kolontsaim-pirenena maro, fa petrakevitra iainana isanandro amin'ny alàlan'ireo sary atsangany ao anatin'ny tontolo misy azy mivantana.
Tian'i Lawson-Body ny fahasamihafàn'ny sarin'ireo goavana mpanao fanatanjahantena alainy sary, toa an'i Tony Parker, Jean Galfione, Roger Federer na Magic Johnson na ireo mpiantsehatra goavan'ny sarimihetsika toa an'i Spike Lee sy Michel Gondry. Fa efa nàka sary ihany koa an'ireo tanoran'i “Ile-de-France” izy araka ny hita ao anatin'ilay bokiny hoe “Jeunes Parisiens”.
llay andian-tantara ety anaty tranonkala “Barbershop ” izay noforonin'i Lawson Body dia nanangana ny sary fototra ho an'ireo Afrikàna am-pielezana ao Parisy, nalaza be mihitsy ary manome fomba fijery tsy dia misy nahafantatra loatra momba ny vondrom-piarahamonina iray manankarena amin'ny resaka kolontsaina sy fifanampiana.
Lahatsary iray navoakan'i Lawson-body (@hugueslawsonbody) tamin'ny 5 Déc. 2015 – 3h08 PST
Resaka nifanaovana tamin'ny mpanakanto maoderna iray sady miaina kolontsaina marolafy :
Global Voices GV: Nandia làlana iray tsy dia hay faritana loatra ianao, teraka tanyTogo ary lehibe teto Parisy izay nanefenao ny ‘fijerinao’. Taratra anatin'ny asanao sy làlana nizoranao ny fahafahanao miditra anaty tontolo samihafa. Ahoana no hamehezanao ny momba anao ao anaty fehezanteny roa monja ?
Hugues Lawson-Body HLB: Ny fahaizana mampifanaraka no fanalahidiny ! Miainga aho, tsy mieritreritra na inona na inona mihitsy any am-piandohana. Tiako ny olona, ary ankafiziko ny miresaka amin'ny olona tsy fantatro. Tena mitondra tamberina tsara ho ahy ny asako. Mifanaraka tsara amin'ny maha-izaho ahy izy na ny mifamadika amin'izay !
GV: Inona avy ny kalitao ilaina mba hahatafita sary iray ?
HLB: Miankina amin'ny endrik'ilay sary ny zavatra rehetra, nefa raha toa ka mihevitra ny hamoaka ny momba ny olona iray dia tsy tokony hatahotra ny “hihaona” aman'olona mihitsy ! Tantanina izy ireny ary indrindra indrindra, tsy maintsy SAHY ! Sahy mamorona fihetsehampo, tranga tsy ampoizina, sary tsy nanjary, any am-boalohany farafaharatsiny ! Ary indrindra, tsy maintsy mizatra mba ho lafatra kokoa hatrany ny amin'ny manaraka.
GV: Naka sary ireo goavana ianao: Spike Lee, Gary Kasparov, Michel Gondry, Roger Federer. Misy tantara iray tsy mahazatra nanamarika anao manokana ve tamin'ny fiarahana tamin'izy ireny ? Misy ve hatsaràna hitanao tamin'ny ankamaroan-dry zareo ireny?
HLB: Nanam-bintana aho nahazo ny fitokian'ny olona izay nandray ahy haka ireny sary ireny, sy ny nisiako matetika teny amin'ny toerana tena tsara ho amin'izany !
Ireo olomalaza efatra notanisainao tamiko ireo dia tena samihafa tanteraka mihitsy. Tanjona samihafa no manosika azy ireo, saingy tsy misy matahotra ny asany ry zareo ! Ho ahy dia izay no teboka iraisan'izy ireo ; Ny asa, ny asa ary ny asa hatrany. Na toa olona nahavita zava-nahagaga aza ireny olona ireny ary mahatonga antsika hietretreritra hoe voajanahary ho azy ireo ny fahafahany manatanteraka ny asany. Tsy ampy ny talentan'izy ireo fotsiny : olona mpilofo fatratra ireny !
GV: Mibodo ny vaovao manerantany izao ny fiakaran'ireo mpanao an-tendrony : Donald Trump any USA, Le Pen eto Frantsa (izay efa nalainao sary ihany koa) ary ny fiakaran'ny fihetsehampo manohitra ny mpifindramonina ao Eoropa. Ahoana no hanazavànao io trangan-javatra io ary ahoana no hahafahana manakana azy ?
HLB: Tena tsy haiko marina izay hanakànana azy, nefa mino aho fa marary ny olona ary ny mora indrindra rehefa fotoana isian'ny olana dia ny mitady mpisolo vaika ny ankàlana. Samy matahotra ny ho very tombontsoa isika rehetra, ny ho very ny filaminam-piainantsika. Nataon-dry Le Pen mianakavy ho anto-barotr'izy ireo izany, tsy ray, tsy zanaka vavy. Ary na resy lahatra aza aho hoe mino 90 % amin'ny tantarany ry zareo ireo, dia resaka tombontsoa no tena izy. Solika tena mandrehitra azy mihitsy koa ny resaka fahefàna.
Mino aho fa mila fotoana ela ny manova ny toetsaina, mila fanabeazana ary faharetana betsaka. Ankafizin'ny olona ny mamerina ny hadisoana teo aloha na ny tantara no miahankahana, safidy io.
GV: Malahelo an'i Togo ve ianao? Mitsidika any matetika ?
Ilay Togo-n'ny fahazazàko no tsaroako, efa fotoana ela aho izay no tsy nanana fotoana niverenana tany. Fahatsiarovana mahery no voatahiriko momba izany. Eritreritro ny handeha hamantatra azy indray. Na mahatsapa ho mifamatotra tsy tapaka amin'ny kolontsaiko togolezy aza aho. Tena vao mainka zavadehibe amiko izany ankehitriny satria manana zanakavavy 2 aho izay tsy maintsy ampitàko io kolontsaina io izay lovan-dry zareo rahateo ihany koa.
GV: Iray amin'ireo lohahevitra tena ilomanosanao ny hatanorana eny an-tanàndehibe. Kanefa toa tsy dia takatra loatra ilay izy. Inona no tsy azo ao anatiny ary ezahanao ampitaina amin'ireo sary alainao?
Kiraiko amin'ilay izy manontolo ny hatanoràna. Tsapako ho tsy maintsy ataoko ny mampiseho azy amin'ny endrika samihafa ananany : lavitr'ireo kisarisary atao azy, fa ny tena zavamisy fotsiny izao. Ezahako ny maka sary ireo tanora araka izay maha-izy azy ireo. Tena manana soatoavina sarobidy toy ny an'ny lehibe ny tanora. Maharary azy ireo ny atao tsinontsinona ary ilainy ny manana aingam-panahy. Isika lehibe dia mila mandre ny fanantenan'io tanora io ary mamaly azy amin'ny fanatanterahana ny fampanantenanana nataontsika sy ny fanolorantenantsika. Raha mitohy mody milaza isika fa hoe toy ny tsy misy ny tanora, dia hamorona fivakisana. Be ny tanora no miasa saina mikatsaka ny mba hankenena azy ireo, ny fisiany, izay mety hiseho amin'ny alàlan'ny herisetra no hiafaràny! Ny andraikitsika amin'ny maha-olondehibe dia tsy miantsy mandalo amin'ny fifampiresahana, ny miezaka mamantatra io hatanoràna io sy miatrika ny fahasamihafàny ary izay mampiavaka azy manokana.
GV: Hafatra tianao hapetraka ho an'ireo mpamaky ny Global Voices
HLB: Tsy misy zavatra na olona tokony hisakantsakana ny fahalalahantsika, aza omena toerana ny tahotra !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/03/80966/
 Hugues Lawson Body: http://hugueslawsonbody.com/